သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး TCDD စက်ခေါင်းရေယာဉ်စုကိုတိုးချဲ့ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
07 / 09 / 2019 Levent Elmastaş ရထားလမ်း, လှိမ့်စတော့ရှယ်ယာ, အထွေထွေ, Institute, စက်ခေါင်း, ခေါင်းစီးသတင်း, Tulomsas, TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က 0
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး TCDD စက်ခေါင်းရေတပ်တိုးချဲ့
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager Erol Arikan နှင့် TULOMSAS မှ General Manager Hayri Avci ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းနှစ်လုံးTÜLOMSAŞမော်တော်ယာဉ်ရေတပ်များ၏ခေတ်မီအစီအစဉ်၏အခြေအနေတွင်အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ်။
အစည်းအဝေးတွင် 2020-2022 ကာလဒီတော့အပေါ်ဒီဇယ်လျှပ်စစ်စက်ခေါင်းအမျိုးမျိုး၏စက်ခေါင်း, ဒီဇယ်, လျှပ်စစ်နှင့်ပြောင်းခံရဖို့။ သူကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ထုတ်လုပ်စက်ခေါင်း၏ပြုပြင်ကိစ္စရပ်များအပေါ်နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ပို့ဆောင်ရေး TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ Erol Arikan, ရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ရထားလမ်းယာဉ်များ၏ယာဉ်အဖြစ်အကြီးအဓိပ်ပာယျ၏ခေတ်မီတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထား၏သက်တမ်းတိုး, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမားရိုးကျလိုင်းများလြှပျစစျမီးနဲ့အချက်ပြမှာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုယူ။ ဒီမျဉ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်စင်း၏ဥပစာ၌ပြစ်မှားမိဖို့လိုအရှိဆုံးအကျိုးရှိစွာလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရေးကြီးဆုံး TULOMSAS ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သမားရိုးကျခရီးသည်နှင့်ပင်ကျွန်တော်စက်ခေါင်း၏ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် တွဲဖက်. လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများအရည်အသွေးနှင့်ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်စေမည်။ သူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုများအတွက်, ငါသည်ခပ်သိမ်းသော TULOMSAS TULOMSAS မိသားစု, အထူးသဖြင့်အထွေထွေမန်နေဂျာကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
တူရကီရဲ့ရထားလမ်းရေတပ်တိုးချဲ့ 20 / 12 / 2017 တူရကီရဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရေယာဉ်များအတွက်ဘဝတွေကိုသစ်ကိုမက်ထရိုရထားအစုံထည့်သွင်းထားပါသည်။6တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Assoc ထက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အသစ်ဆောက်လုပ်ထားမြေအောက်ရထားကားတစ်စီး။ ဒေါက်တာ Mustafa ငါးရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဟာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရေယာဉ်စုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ 400 တထောင်ကျော်မြို့တော်နေ့တိုင်းခရီးထွက်ကြောင်းရထားလမ်းခရီးသည်ပိုမိုအဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကလုပ်ထ speeded ခဲ့သည်။ အတ္တ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, ယာဉ်ရဲ့မြေအောက်လျင်မြန်စွာအကူးအပြောင်းကိုပြောင်းမနေ့တိုင်းအသစ်သော tools တွေကိုထပ်ပြောသည်။ Sincan ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုန်များတွင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စည်းဝေးပွဲကိုပြီးစီးခဲ့နှင့်အသစ်မက်ထရိုယာဉ်များ၏ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု 516ရာခိုင်နှုန်းပိုအတ္တ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဖြင့်ကယ်လွှတ်ခဲ့သည်။ အတ္တအရာရှိများ, ...
TCDD YHT ရေယာဉ်စုချဲ့ထွင် 22 / 06 / 2018 အစည်းအရုံးသမ္မတနိုင်ငံတူရကီ၏ပြည်နယ်မီးရထားKontrolür (DEMKOND) ၏ဥက္ကဋ္ဌ Mehmet Kara-Konya ကြီးစိုးမှုသတင်းစာတစ်ဦးအလည်အပတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားအစု 26 လကြာပြီးနောက်ကိုအပ်လိမ့်မည်ဟုနေစဉ်အစီအစဉ်သတို့သားလမ်း, သစ်ကိုမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား၏ပထမဆုံးအကဲဖြတ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်သတင်းစာအယ်ဒီတာ Mehmet Dursun, အကြာတွင်936 လအတွင်းသတ်မှတ်။ သူ DEMKOND နိုင်ငံတော်သမ္မတ Mehmet Kara-မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလြော့ဆက်လက်ပြောသည်နံပါတ်သွားရောက် Konya မှလာ၏။ နောက်ဆုံးပေါ် 269လအတွင်းမှာမတ်လဖန်ဆင်းပထမဦးဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်ရထားစုံ၏ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအကြာတွင်အခြား set ကို 36 လကြာပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ပါလိမ့်မယ် ...
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားမီးရထားကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးအသင်းမှ Inc ၏နယူးအဖွဲ့ဝင် 13 / 05 / 2017 တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏မီးရထားကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးအသင်းမှ Inc ကိုနယူးအဖွဲ့ဝင်: မီးရထားပို့ဆောင်ရေးအသင်းမှအသစ်အဖွဲ့ဝင်များက ပို. ပင်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းနေ့ရက်ကိုအတူကြီးထွားခြင်းနှင့်ခိုင်မာစေရန်ဆက်လက်။ အဆိုပါ 02 မေလ 2017 DTD ရဲ့သမိုင်းဝင် TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာအစည်းအဝေးတွင်ခုနှစ်တွင်အဖွဲ့ဝင်လျှောက်လွှာကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်အကဲဖြတ်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏လွတ်လပ်၏အဖွင့်ရက်စွဲကိုဇန်နဝါရီလ 01 2017 ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်တကယ်စတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က ကူးတို့ဖွငျ့ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ, ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးသယ်ဆောင်။ high-speed ရထား, သမားရိုးကျရထား, မြို့ပြခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးရထား, Marmaray, BAŞKENTRAYအဆိုပါ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က ... by
ချဲ့ထွင် Kayseri သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မောင်း 30 / 04 / 2019 Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Memduh Büyükkılıçသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှလွယ်ကူခြင်းဆောင်ခဲ့နိုင်ငံသားများနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်စီးရီး။ ယူဆုံးဖြတ်ချက်များမေလ 1 ကနေအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်။ တီထွင်မှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှဆောင်ခဲ့သဖြင့်, စီးပွားရေးနိုင်ငံသားများမြို့တော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုအပြုသဘောအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mamdouh Büyükkılıç'ın, ယခင်သီတင်းပတ်ဆက်ခံအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ်။ ဤသည်ထိုသူအချို့တို့သည်မေလ 1 ကနေအကျိုးသက်ရောက်သို့ရောက်ရလိမ့်မည်ရလဒ်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူအစည်းအဝေးများတစ်စီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ရထားလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ယူဆုံးဖြတ်ချက်များ၏မူဘောင်အတွင်းစုပေါင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-ရထားလမ်း system ထဲကနေဖယ်ရှားထားလွှဲပြောင်းအခကြေးငွေလွှဲပြောင်းစဉ်အတွင်းလက်ခံရရှိဘတ်စ်ကားစနစ်အားအဖိုးအခမှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ 1 ...
ချဲ့ထွင် Kayseri သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မောင်း